အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် (၁)နှစ်လုံးစာဟောတမ်း(၂၀၁၉)… – Askstyle
( For Zawgyi )
သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း ဘုရားဆင်းတုတော် ပုံတော် ၊ ရဟန္တာ ပုံတော်များ ကြွလာတတ်၏။ မထင်မှတ်ထားသော ခရီးများ ၊ မရည်ရွယ်သော ခရီးများ သွားရတတ်၏ ။ လူမျိုးခြား ကူညီခြင်း နိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သတ်သော ကိစ္စများ အောင်မြင်ခြင်းများ ကြုံရမည် ဖြစ်၏။ နာမည်ဂုဏ် သတင်းတိုးတက်ခြင်း ဘုန်းတန်ခိုး တိုးတက်ခြင်းများ ကြုံရမည်ဖြစ်၏…
မနာလိုသူလဲ ပေါလိမ့်မည် ။ မိမိထက် မြင့်သူနိမ့်သူ နှစ်ဦးလုံးက ဒုက္ခပေးတတ်သော ကာလဖြစ်၏ ။လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်များ မိတ်ရင်း ဆွေရင်း များနှင့် လမ်းခွဲရတတ်သည် ။ စနေနံ ပစ္စည်းများ ဝင်လာလိမ့်မည် ။ ရေတွင်း ရေကန် ကိစ္စများ အောင်မြင်မည် ဖြစ်၏ ။ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်တော့ မလိုလိုနှင့် အခက်အခဲကြီးစွာ ကြုံရတတ်၏…
ကြီးကဲသူများ အထက် လူကြီးများကြောင့် စိတ်ညစ်ရတတ်၏ ။ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲ အစီအစဉ်များ အထစ် အငေါ့ ကြုံခြင်း ရက်ရွှေ့ခြင်းများ ဖြစ်ရတတ်၏ ။ အိမ်ထောင်ရှိလျင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေနေမည် ။ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်နေမည် ။ ပြောင်းလျှင် ပိုဆိုးသွားတတ်၏ ။ အစာအိမ်ဖြစ်ခြင်း ကျန်းမာရေး ညံ့၍ ခြေထောက် ၊ ခါး ၊ သွား ဒုက္ခပေးခြင်း ကြုံရတတ်၏ ။ ဤကာလအတွင်း အမှုအခင်း မဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လို့ပေ၏ ။ ဖြစ်ခဲ့လျှင်မပြီးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်၏ ။ ငွေနှင့်လိုက်လျှင် ရှုံးသွားတက်ပါ၏ ။ ပစ္စည်း မငှါးရမ်းပါနှင့် ဆုံးသွားလိမ့်မည်…
ဤကာလအတွင်း မည်သည့် အခက်အခဲနှင့် ကြုံသည်ဖြစ်စေ အားကိုး မရှာပါနှင့် ။ ဒုက္ခပေးမည့်သူများသာ ပေါ်လာတတ်၏ ။ အောက်လက်ငယ်သား ထွက်သွားတတ်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း ကြုံရတတ်၏ ။ ထီဘက်၌ ကံကောင်းသော အချိန် ဖြစ်ပါ၏ ။ ပညာအသစ် တစ်ခုရတတ်၏…
အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံလိမ့်မည် ။ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း သွားရတတ်၏ ။ ကျောဒုက္ခပေးခြင်း ၊ ကျော၌ ကျန်းမာရေး ညံ့ခြင်းရောဂါ ရခြင်းများ ဖြစ်တတ်၏…
“ယတြာ”=== စနေနေ့ နံနက်တွင် အိမ်ဘုရား၌ မုန်ဖက်ထုပ် (၁၂)ထုပ်လှူ၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါ ။သခွားသီးတွင် သွားကြားထိုးတံ သက်စေ့စိုက်၍ ရေမျောပါ. . . . .
CRD- ဆရာ​သူရိဇ ဗေဒင်​နှင့်လက္ခဏာ
( For Unicode )
သငျသညျ ယခုနှဈအတှငျး ဘုရားဆငျးတုတျော ပုံတျော ၊ ရဟန်တာ ပုံတျောမြား ကွှလာတတျ၏။ မထငျမှတျထားသော ခရီးမြား ၊ မရညျရှယျသော ခရီးမြား သှားရတတျ၏ ။ လူမြိုးခွား ကူညီခွငျး နိုငျငံခွားနှငျ့ပတျသတျသော ကိစ်စမြား အောငျမွငျခွငျးမြား ကွုံရမညျ ဖွဈ၏။ နာမညျဂုဏျ သတငျးတိုးတကျခွငျး ဘုနျးတနျခိုး တိုးတကျခွငျးမြား ကွုံရမညျဖွဈ၏…
မနာလိုသူလဲ ပေါလိမျ့မညျ ။ မိမိထကျ မွငျ့သူနိမျ့သူ နှဈဦးလုံးက ဒုက်ခပေးတတျသော ကာလဖွဈ၏ ။လုပျဖျော ကိုငျဘကျမြား မိတျရငျး ဆှရေငျး မြားနှငျ့ လမျးခှဲရတတျသညျ ။ စနနေံ ပစ်စညျးမြား ဝငျလာလိမျ့မညျ ။ ရတှေငျး ရကေနျ ကိစ်စမြား အောငျမွငျမညျ ဖွဈ၏ ။ လုပျငနျးမြား အောငျမွငျတော့ မလိုလိုနှငျ့ အခကျအခဲကွီးစှာ ကွုံရတတျ၏…
ကွီးကဲသူမြား အထကျ လူကွီးမြားကွောငျ့ စိတျညဈရတတျ၏ ။ အလှူပှဲ မင်ျဂလာပှဲ အစီအစဉျမြား အထဈ အငေါ့ ကွုံခွငျး ရကျရှခွေ့ငျးမြား ဖွဈရတတျ၏ ။ အိမျထောငျရှိလငျြ အိမျထောငျရေး အဆငျပွနေမေညျ ။ လကျရှိ အလုပျအကိုငျ ပွောငျးခငျြစိတျ ဖွဈပျေါနမေညျ ။ ပွောငျးလြှငျ ပိုဆိုးသှားတတျ၏ ။ အစာအိမျဖွဈခွငျး ကနျြးမာရေး ညံ့၍ ခွထေောကျ ၊ ခါး ၊ သှား ဒုက်ခပေးခွငျး ကွုံရတတျ၏ ။ ဤကာလအတှငျး အမှုအခငျး မဖွဈစရေနျ အထူးဂရုစိုကျဖို့ လို့ပေ၏ ။ ဖွဈခဲ့လြှငျမပွီးနိုငျပဲ ဖွဈနတေတျ၏ ။ ငှနှေငျ့လိုကျလြှငျ ရှုံးသှားတကျပါ၏ ။ ပစ်စညျး မငှါးရမျးပါနှငျ့ ဆုံးသှားလိမျ့မညျ…
ဤကာလအတှငျး မညျသညျ့ အခကျအခဲနှငျ့ ကွုံသညျဖွဈစေ အားကိုး မရှာပါနှငျ့ ။ ဒုက်ခပေးမညျ့သူမြားသာ ပျေါလာတတျ၏ ။ အောကျလကျငယျသား ထှကျသှားတတျခွငျး ၊ ကနျြးမာရေးညံ့ခွငျး ကွုံရတတျ၏ ။ ထီဘကျ၌ ကံကောငျးသော အခြိနျ ဖွဈပါ၏ ။ ပညာအသဈ တဈခုရတတျ၏…
အိမျထောငျဘကျ ကနျြးမာရေး ညံလိမျ့မညျ ။ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခနျး သှားရတတျ၏ ။ ကြောဒုက်ခပေးခွငျး ၊ ကြော၌ ကနျြးမာရေး ညံ့ခွငျးရောဂါ ရခွငျးမြား ဖွဈတတျ၏…
“ယတွာ”=== စနနေေ့ နံနကျတှငျ အိမျဘုရား၌ မုနျဖကျထုပျ (၁၂)ထုပျလှူ၍ လိုရာ ဆုတောငျးပါ ။သခှားသီးတှငျ သှားကွားထိုးတံ သကျစစေို့ကျ၍ ရမြေောပါ. . . . .
CRD- ဆရာသူရိဇ ဗဒေငျနှငျ့လက်ခဏာ